Xafiiska Ra'isul wasaaraha oo hadal kooban kasoo saaray Maxkamadayntii Wariye Koronto iyo Haweeneyda - Shaaciye.com
Xafiiska Ra'isul wasaaraha oo hadal kooban kasoo saaray Maxkamadayntii Wariye Koronto iyo Haweeneyda 08/02/2013 By: Mohamed
Iyadoo dhawaan ay Maxkamadda Gobalka Banadir Xukun Xarig hal Sano ah ku riday Wariye Cabdi Caziiz Koronto oo Idaacadaha Maxaliga ka tirsanaa iyo Haweeney kale, ayaa waxaa Hadal kooban arrintaas kasoo saaray Xafiiska Ra’isul wasaaraha.
Nuqul ka mida Warka kasoo baxay Xafiiska oo inasoo gaaray ayaa waxaa lagu yidhi “ Soomaaliya waxay leedahay Garsoor madax banaan. Maxkamaduna waxay qaadatay go’aan”
Waxaa intaa lagu daray in Dowladdu ay aad ugu adagtahay ilaalinta Xuquuqda Aadamiga isla markaana haatan ay Dowladdu samaysay Guddi madax banaan oo kasoo warbixiyay tacadiyadii Xuquuqul Insaanka ka dhanka ahaa ee dhacay 12-kii Bilood ee lasoo dhaafay.
Sida Warkan kasoo baxay Xafiiska Ra’isul wasaaraha lagu muujiyay, waxay Dowladdu ixtiraamaysaa go’aanka ay Maxkamaddu ka qaadatay Dacwaddii loo heystay Wariyaha iyo Haweeneyda kale oo labadooduba ku eedeysnaa ka been sheegista Ciidamada Booliska.
Dhinacyo badan oo Beesha Caalamka iyo Soomaaliba isugu jira ayaa dhaliilay Xukunka ay Maxkamaddu riday. Waxaana Dowladda iyo Garsoorka Dalkaba loogu baaqay in dib loo eego Xukunkaas.
Wariye Koronto wuxuu ku eedeysnaa inuu Warbixin ka diyaariyay hadalo been abuur ah oo Haweeneyda iyadana la xukumay ay ku sheegtay in Ciidamo Boolis ay ay iyada Kufsi kula keceen. Maxkamadduna waxay shaacisay in baaris la sameeyay lagu ogaaday inaanay jirin wax Kufsi ah oo Haweeneyda lagula kacay.